I-Methandrostenolone (i-Dianabol) ipowder (72-63-9) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / IMetandrostenolone (Dianabol) ipowder
SKU: 72-63-9. Udidi: abanye
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Methandrostenolone (i-Dianabol) powder (72-63-9), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Methandrostenolone (i-Dianabol) ipowder ngumlomo ogqithisekileyo womlomo we-steroid ukusa kwi-market kwaye enye ye-steroids ethandwa kakhulu nayiphi na ifomu. Ngexesha eliphantse lifunyenwe njengelithebhulethi yomlomo, i-Dianabol inokufunyanwa njengesisombululo esisijobileyo, kodwa iipilisi zimelela indlela yokuqala yokulawula.
I-Methandrostenolone (Dianabol) ividiyo powder
I-Methandrostenolone (Dianabol) ipowder esisiseko Abalinganiswa
igama: I-Methandrostenolone (Dianabol) ipowder
I-Methandrostenolone (Dianabol) ukusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-Methandrostenolone (i-Dianabol) ipowder nayo ibhekiselwa kuMethandrostenolone powder, methandienone, i-Dianabol powder, i-dbol, i-Averbol, i-Danabol, iMetanabol, i-Naposim, i-Vetanabol.
Ukusetyenziswa kweMetandrostenolone powder
Uluhlu lweeritha ye-Dianabol powder ngokuqhelekileyo yi-20-50 mg / ngosuku.
Ngokuqhelekileyo, le ntsebenziswano idibene ne-500-1000 mg / iveki epheleleyo ye-anabolic steroids injected.
Isilumkiso kwi-Dianabol powder
Amanani aphezulu e-Dianabol powder ayahluka ngokuxhomekeke kumava kunye neminqweno yomntu ngamnye. Nangona i-rumor ne-myth, i-tablet yeDbol ifomathi izakuvelisa iziphumo eziphawulekayo kunye ne-15mg ngosuku. Nangona kunjalo, uninzi luya kuneliseka kakhulu nge-20-25mg ngosuku lwe-dosing. Hlalani nikhumbule, ixesha ngalinye xa sikwandisa umthamo, oku kwandisa amathuba okuba nemiphumo emibi kwaye kwenza kube nzima ukulawula.
I-Methandrostenolone powder yi-testosterone etholakala kwi-anabolic androgenic steroid. Ngokusemthethweni, yindlela ehleliweyo yokuguqula i-androgen testosterone yesibini. I-Dianabol powder yi-hormone ye testosterone ene-bond edibeneyo kabini kwikhabhoni enye kunye nezikhundla ezimbini. Olu tshintsho oluncinane luyanciphisa uhlobo lwe-hormone ne-androgenic.
IMetandrostenolone (Dianabol) yokuthengisa
Indlela yokuthenga iMethandrostenolone powder: uthenge i-Dianabol powder evela kwi-AASraw
I-AAS eluhlaza ihlinzeka ubumsulwa 99% Methandrostenolone / Dianabol powder oluhlaza ukuya kumaziko angaphantsi komhlaba ukuze ufumane inzuzo enkulu yomlomo.
DianabolMethandrostenolone powdereffects, umyinge, yonke into omele uyiqonde !!!